प्रयोग, उपचार र समीक्षा: ओन्कोलजी मा शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि प्याच। प्लास्टर analgesic विरोधी भडकाऊ
क्यान्सर सबैभन्दा गम्भीर र जीवन खतरामा मानव हुन्। समय सल्लाह र उपचार खोज्न गर्दैन भने, यो सबै मानव गुमाउन सम्भव छ। यो रोग नै धेरै प्रारम्भिक चरणमा लगभग देखाउन गर्दैन टिप्पण लायक छ। व्यक्ति कुनै पनि दुखाइ महसुस गर्दैन र पहिले जस्तो एकदम सामान्य जीवन सक्छ। तर अर्कोतर्फ, कठोरता को डिग्री सम्म पर्याप्त भएको छ जब, रोगी गंभीर दुखाइ प्रकटीकरण, बस सबै समय मा छैन सहन गर्न सकिन्छ जो complains। यस्तो अवस्थामा, रोगी एक निश्चित एकदम पीडा अवशोषित हुनेछ जो, analgesics संख्या नियुक्त गर्नुपर्छ।
मिति, त्यहाँ क्यान्सर लागि दुखाइ राहत कसरी विभिन्न तरिकाहरू छन्। यो विभिन्न चक्की, इंजेक्शन र ओन्कोलजी मा विशेष प्याच शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि हो। अक्सर, विरामीहरु एक घण्टा भित्र हुन्छ प्रभाव जो शक्तिशाली इंजेक्शन, प्रबन्ध छन्। यस मामला मा प्याच अर्कोतर्फ, यो चक्की र इंजेक्शन तुलनामा शरीर धेरै कम जमानत क्षति ल्याउँछ, छिटो अभिनय छैन।
शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि प्याच बलियो क्यान्सर दुखाइ को प्रकटीकरण लागि प्रयोग गरिन्छ र शरीर मा सुनिंनु कम गर्न। एनेस्थेसिया यस प्रकारको एकदम लामो समय को लागि पहिले नै प्रयोगमा छ र धेरै सुविधाजनक छ। विशेष गरी यो एक लामो समय को लागि अर्को कुनै एक हुनेछ जब व्यक्तिमा क्यान्सर विरामीहरु लागि उपयोगी हुन सक्छ। जब तपाईं सिर्फ एक गोली वा इंजेक्शन दिन सक्दैन। यो प्याच गंभीर दुखाइ को एक स्थायी अभिव्यक्ति संग मान्छे को लागि डिजाइन गरिएको छ। धेरै नै औषधिको खुराक आवृत्ति ट्यूमर आकार र रोग को चरण मा पूर्णतया निर्भर gluing। अझै यो कि यस प्याच दुखाइ समय समयमा हुन्छ र नै समय ठाउँ लिन सक्छ मानिसहरूलाई लागि सिफारिस गरिएको छैन उल्लेख गर्नुपर्छ।
यो विरोधी भडकाऊ analgesic प्याच "Versatis" एक सिंथेटिक analgesic छ र एक psychotropic एजेन्ट रूपमा कार्य। मात्र transdermally प्रयोग। कारण केही घटक गर्न बढ्छ दुखाइ सीमा ओन्कोलजी मा। तदनुसार, मस्तिष्क गर्न दुखाइ को भाँचिएको प्रसारण। क्यान्सर विरामीहरु मा प्याच लागू गर्दा क्यान्सर को विकास विशेषता लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ एक analgesic र बेहोशि औषधि प्रभाव, त्यहाँ छ।
को प्याच रोगी हात पालन भएपछि, रगत को विश्लेषण सक्रिय संघटक को एकाग्रता को न्यूनतम रकम पत्ता सकिन्छ। तर यस्तो परिणाम मात्र पहिले कुनै पनि अतिरिक्त painkillers लिएका छन् नगर्ने ती विरामीहरु पत्ता सकिन्छ। रिसेप्शन सुरु गरिएको छ भने, रगत सक्रिय पदार्थ सिधै कि टालो देखि निर्धारण गर्न धेरै कठिन हुनेछ। analgesia को न्यूनतम समय बारी मा नकारात्मक अन्य शरीर को काम प्रभावित जो तीन दिन, को लागि रहन्छ। विशेष यो श्वसन केन्द्र को दमन, साथै हृदयको धीमा सम्बन्धित छ। किन एनेस्थेसिया यस प्रकारको स्वतन्त्र चुनिएको गर्न आवश्यक छ भन्ने छ। मात्र उचित निदान पछि चिकित्सकको सल्लाह मा।
भने, क्यान्सर संग प्रयोगको लागि शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि प्याच एक पक्ष प्रभाव रूपमा retching उत्पन्न हुन सक्छ। यो कारणले गर्दा तथ्यलाई छ कि उल्टी केन्द्र को काम मा प्रभाव जगाउने को माध्यम केही घटक। साथै, प्याच को दीर्घकालीन प्रयोग फलस्वरूप, काम को गतिविधि कम, लत हो र। त्यो छ, रोगी बिस्तारै सम्बन्ध गाँसिसकेको पछि दुखाइ गायब गर्दैन गुनासो गर्न थाल्छ। त्यसपछि व्यक्ति थप अतिरिक्त analgesics माग गर्न थाल्छ। प्रत्येक गति प्रयोग रही एक व्यक्ति केही व्यक्तिगत विशेषताहरु गर्न owing, फरक छ। तर यो केही अवस्थामा, डाक्टर कडा धेरै फरक लागूपदार्थ लिने सिफारिस भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। यो एकदम को हृदय प्रणाली को प्रदर्शन र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली को कामकाज असर गर्न सक्छ।
महत्वपूर्ण सुविधाहरू प्याच को संविधान घटक बिस्तारै सही परिमाणमा निरन्तर कार्य प्रदान गर्दा, छाला मार्फत भित्र पस्नु छ। तर अर्कोतर्फ हुन सक्छ र व्यक्तिगत छाला घृणाको। उदाहरणका लागि, खुजली, नम्र राता वा दाना ठाउँमा एक टाँसिएको प्लास्टर हुन सक्छ। त्यसैले, यो उपकरण प्रयोग गर्नु अघि यो सबै भन्दा राम्रो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् छ।
पूर्वोक्त साथै अक्सर प्रश्न आवेदन समयमा सीधा हुर्काउन सक्छन्। हामी शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि को विकल्प सुविधा सकेसम्म सबै भन्दा साधारण प्रश्न र उत्तरहरू हेर्न।
1) अभिनय दुखाइ मुक्त कसरी छिटो पैच? अक्सर, प्लास्टर को कार्य gluing पछि एक दिन देखा पर्न थाल्छ। त्यसैले कहिलेकाहीं जब डाक्टर, ठ्याक्कै क्षण केही अतिरिक्त analgesics सल्लाह दिन्छन् सक्छ प्रारम्भिक चरणमा बलियो दुखाइ को प्याच हामी हुनेछ निश्चित सजिलै देखिने कार्य रूपमा। त्यसैले, अन्य ट्याब्लेटको संग उपचार तपाईं निश्चित गरेर दोस्रो दिन बारेमा रोक्नु पर्दछ।
2) म शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि प्याच "Dyurogezik" कसरी अक्सर परिवर्तन गर्नुपर्छ? तीन दिनको लागि, conversely, पछि एक प्लेट को कार्य डिजाइन गरिएको छ, त्यसैले यसलाई प्राय यसलाई परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छैन, वा। रगतमा संग्रह पछि सक्रिय पदार्थ मा सम्बन्ध गाँसिसकेको पछि दोस्रो दिन स्थिर प्रभाव छ।
3) टास्ने पट्टियाँ दुखाइ मुक्त कसरी गोंद गर्न? हुन निश्चित टास्ने क्षेत्र समतल र सफा हुनुपर्छ। लुगा धुने डिटर्जेंट प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ जब, यो सिर्फ न्यानो नम तौलिया संग हटाउन पर्याप्त हुनेछ। सम्बन्ध गाँसिसकेको लागि स्थान राम्रो evaporated छ, हामी यसको प्याकेजिङ्ग देखि प्याच प्राप्त र सुरक्षा फिलिम हटाउन। चिकित्सकीय उत्पादन लगभग 30 सेकेन्ड को लागि छाला विरुद्ध दृढ थिचिएको गर्न छ, त तपाईं जान सक्नुहुन्छ। को प्याच को शीर्ष लुगा लगाउँथे गर्न सकिन्छ, र तपाईं पनि ओछ्यानमा जान सक्नुहुन्छ।
4) यो सम्भव छ पूर्ण ओन्कोलजी र शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि स्विच केही दिन अन्य analgesics संग उपचार गर्न प्याच हटाउन? यस मामला मा डाक्टर, यो कडा त्यसो गर्न सिफारिस गरिएको छैन। तर यदि त्यहाँ यस्तो आवश्यकता थियो, यो आवश्यक आफ्नो चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट परामर्श छ।
शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि प्याच "Dyurogezik" वा अन्य कुनै पनि चिनियाँ आफ्नै किन्न त सरल छैन। यो उपकरण निःशुल्क प्रयोग analgesics छैन भन्ने तथ्यलाई। यो औषधि पसल बिक्रि छैन एक निर्धारण बिना यसबाहेक, यो एकदम महंगा छ। उहाँले चिकित्सकको निर्धारण कुनै पनि मामला मा प्रति उपलब्ध हुनेछ भने। बलियो painkiller, लत, एक narcotic दबाइ रूपमा केही लागि सेवा गर्न सक्छन् - यो प्याच कि विश्वास छ।
चिकित्सकको निदान र निर्धारण बिना यो फार्मेसी मा छैन किनेको गर्न सकिन्छ किन छ। छैन त्यहाँ नेटवर्क मा अगाडि कम्पनीहरु को धेरै छ यस्ता कोष आरक्षित गर्न सिफारिस गरिएको। तपाईं बस घोटाला चाल पकड गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट को अधिक मूल्य एक कम लागत, थप लेनदेन को फुरतीला को likelihood बढ्छ जो लोभ्याउन सक्छ। पछाडि लागि शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि प्याच खरिद गरेर, तपाईंले निर्धारण गरेर फार्मेसी देखि यो किन्न पनि भने, रूपमा ध्यान हुनु आवश्यक छ। अलिकति कम मूल्य फरक निर्माताहरु एक analgesic प्याच चिनियाँ हुन सक्छ। यस्तो उपकरण पनि एकदम प्रभावकारी छन्, र एक symptomatic उपचार रूपमा सबै अरु देखि अलग कुनै छन्।
यो शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि एजेन्ट एक बरु विरोधाभासी विशेषताहरु द्वारा विशेषता, तर साथ सकारात्मक अंक को एक अधिकता छ। यस मामला मा, डाक्टर यस्तो विरोधाभास एक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति, रोग को गंभीरता, क्यान्सर को कारण, र उमेर मात्र व्यक्तिगत विशेषताहरु व्याख्या। तपाईं एक दबाइ को चयन मा रोगी प्रशंसापत्र मा केवल आधारित गर्न सक्छन् किन कि छ। आवश्यक परीक्षा र चिकित्सकको नियुक्ति गर्न आवश्यक छ। यस्तो उपचार निको छैन तर मात्र विस्तार र रोगी जीवन सुविधा। यो आवश्यक छैन, आशा गर्न प्याच प्रयोग गरेपछि रोग लाग्न वा त्यो एकदम हुनेछ रोग को लक्षण कम छ। यो केवल एक हो symptomatic उपचार।
औषध: प्रतिरक्षा-बुस्टिङ लागूपदार्थ
"Ranitidine" बाट के छ? "रनिटिडिन" को सहायता संग ईर्ष्या र पेट अल्सर को उपचार
औषधि "Triovite"। प्रयोगको लागि निर्देशन
मा जन्म दिन "हट": खाना पकाउन के?
वार्षिक Thunberg: बीउ देखि बढ्दै
औषधि "Venarus"। डाक्टर को समीक्षा। निर्देशन
Kupibilet.ru ( «Kupibilet"): ग्राहक समीक्षा
वकील को हस्तलिखित शक्ति अब आवश्यक छ!
मास्को मा प्रोटेस्टेन्ट चर्च। इतिहास र प्रस्तुत
"Residence Utrish" (होटल): समीक्षा, फोटो
Gymnocalycium mihanovichii: वर्णन, खेती र प्रजनन सुविधाहरू